Boko Xaraam oo sheegtay in ay 25 askari ka dishay milatariga Niger - BBC News Somali
Boko Xaraam oo sheegtay in ay 25 askari ka dishay milatariga Niger
Lahaanshaha sawirka AFP/BOKO HARAM
Mintidiinta kooxda Boko Xaraam ee xiriirka la leh kooxda la baxday dowladda Islaamka ayaa sheegaysa in ay dishay in kabadan 25 askari oo ka tirsan milatariga dalka Niger, weerar ka dhacay tuulada Toumour oo ku taalla koonur bari dalkaasi.
Kooxdan oo loo yaqaan dowladda Islaamka ee Galbeedka Afrika ayaa arrintan ku sheegtay farriin ay soo dhigtay intarneedka.
Balse dowladda Niger ayaa sheegeysa in weerarkaasi lagu dilay toddobo askari oo kaliya, laguna dhaawacay 17 kale.
Kooxda dowladda Islaamka ku xiran ee Boko Xaraam ayaa sheegeysa in dagaalyahannadeeda ay milatariga dalkaasi kala wareegeen dhawr baabuur iyo hub.
Sida ay kooxdani sheegtay weerarkan uu dhiigga badan ku daatay oo ay ku qaadeen xarun milatari ayaa ka dhacay ku taala Toumour ee gobolka Diffa oo u dhow xudduudda uu dalkaasi la wadaago dalka Nigeria, halkaasi oo kooxdani ay ku xooggan tahay.
Kooxdani mintidka ahi ayaa sheegeysa in weerarkaasi ay ku dileen in kabadan 25 askari basle dhankooda uusan wax dhibaato ah soo gaarin.
Mas'uuliyiinta dalka Niger ayaa xaqiijiyay weerarka lagu qaaday saldhigga milatari balse waxa ay sheegayaan in toddobo askari oo kaliya weerarkaasi lagu dilay, mid kale lagu la'yahay nolal iyo geeri.
Weerarkan ayaa ku soo beegmaya xilli waddamada reer galbeedka oo Britain iyo Faransiiska ay ka mid yihiin ay xoojinayaan taageerada milatari iyo tan dhaqaale ee ay kula dagaalamayaan mintidiinta Niger iyo kuwa waddamada kale ee Saaxel.
Bishii oktoobar ee saandkii hore, weerar ay mintidiintu ka geysteen meel u dhow xudduudda dalkaasi Niger uu la wadaago Mali ayaa lagu dilay afar askari oo mareykan ah iyo tiro askarta Niger ah.
Dhulkaasi waxaa ka hawlgala mintidiin xiriir la leh daacish iyo Al-Qaaciddada.